Xarunta Xukuumada ridada ee Ex Villa Soomaaliya maxaa ka dhex jira ? Isqabqabsiga Dowlada ridada ah oo Cirka isku sii shareeray.(WARBIXIN KOOBAN) | Halganka Online
Xarunta Xukuumada ridada ee Ex Villa Soomaaliya maxaa ka dhex jira ? Isqabqabsiga Dowlada ridada ah oo Cirka isku sii shareeray.(WARBIXIN KOOBAN)
Isqab qabsigii u dhexeeyey Xildhibaanada Baarlamanka DKMG ah ayaa sii xoogaystay kadib markii ay gacanta ka taageen Dowladda Jabuuti iyo Q.Midoobe oo isku dayey in ay dhax dhaxaadiyaan labada dhinac.
Khilaafkii u dhexeeyay Xildhibaanada Baarlamanka ayaa ku sii baahay Madaxda DKMG ah oo docda kale isku murunsan Heshiiskii lalagalay Qabuura Galeenka Mushrikiinta ah oo dhankooda sheegay in uu Burburay Heshiiskii Addis Ababa.
Shalay ayaa waxaa magaalada Muqdisho ku kulmay Xildhibaanada taageersan in xilkii uu ka dhamaaday Aadan Madoobe kulankaas ka dibna waxay uga digeen Shariifka in uu soo farageliyo Khilaafka ka dhaxtaagan Baarlamaanka.
Xildhibaan Cumar Isloow ayaa sheegay in Aadan Madoobe uu lacago ku faraqayo maleeshiyaadka DKMG ah iyo AMISOM si ay hor istaagaan kulamada ay Xildhibaanada diidan Madoobe Muqdisho ku yeeshaan.
Waxaan uga digaynaa Aadan Madoobe in uu noo adeegsado Ciidanka Dowlada iyo kuwa AMISOM, anaga xor ayaan nahay fikirkayna ayaan sheegaynaa mana ogolaan doono sharci darro” ayuu yiri Cumar islow.
Shariif Sheykh Axmed iyo Shariif Xasan Sheykh Aadan ayaa iyana is khilaafsan waxayna isku fahmi la’yihiin xilalka lasiinayo Mushrikiinta G/gaduud, shariif Sheykh Axmed ma ogola in xilal lasiiyo Kooxdaasi wuxuuna taaganyahay in 4.5 wax loogu qaybiyo halka Shariif Xasan Sheykh Aadan oo doonayo in si caadi ah wasiiro loosiiyo.
Labada Shariif ayaan hadda isku fiicnayn waxayna kala wataan laba qorshe, Shariif Xasan wuxuu doonayaa in uu noqdo Gudoomiyaha Baarlamanka islamarkaana Qabuura galeenka xilal lasiiyo isagoo dhaqaale ku bixinaya sidii Aadan Madoobe loo ridi lahaa.
Xaaladda DKMG ah aad bay uxuntahay waxaana Mushaaraad loo la’ayahay boqolaal maleeshiyaad ah oo dalka Dibadiisa loogu soo tababaray qolada KMG ah,suuqyada hubka waxaa buux dhaafiyay Hub ay la soo baxsanayaan maleeshiyaadka DKMG ah oo dhaqaale xumo baahsan halakaysay.
« Maleeshiyaad taabacsan Axmed Madoobe oo Gaadiid Rakaab ah ku baartay inta udhaxaysa Qooqaani iyo Dhoobleey. Saraakiisha Ciidamada Shabaabul Mujaahidiin ee shalay gaaray degmada Ceelbarde oo kulamo laqaatay Shacabka Muslimiinta ee degmadaasi ku Nool. »